छुट्नु भयो कि ? मानुषी लघुवित्तको आइपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन, हालसम्म कतिले भरे ?
मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ । कम्पनीले साउन २७ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा विक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले एक सय रुपैयाँ अंकित दरमा ३ करोड ९३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको ३ लाख ९३ हजार ७५० कित्ता आईपीओ निष्काशन तथा विक्री खुला गरेको हो ।
संस्थाको आईपीओमा शुक्रवारसम्म मागभन्दा ६५ दशमलव २० गुणा बढी आवेदन परेको छ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले दिएको जानकारी अनुसार शुक्रवार साँझ ५ बजेसम्म १८ लाख ५६ हजार ५५० जना आवेदकहरुबाट २ करोड ४० लाख ३४ हजार १५० कित्ता शेयर खरीदको आवेदन परेको हो ।
हाल लघुवित्तको चुक्ता पूँजी ७ करोड रुपैयाँ छ। आईपीओ बाँडफाँटपश्चात लघुवित्तको चुक्ता पूँजी १० करोड ९३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ